အမေးအဖြေများ - Omni CNC နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများစက် configuration များပေါ် မူတည်. နှင့်စျေးကွက်အချက်ထောက်ပံ့ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အသင့်လျော်စက်ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့် quotation အတလတွင်တရားဝင်သည်အပြီးသင်တစ်ဦး updated စျေးနှုန်းစာရင်းပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
: သင် Western Union သို့မဟုတ် PayPal ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ဖို့ငွေပေးချေမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် sales@omni-cnc.com.
CNC Router-အပြည့်အဝ 12 လအတွင်းပြန် Router က CNC နှင့် ons တွေကို add 3rd ပါတီအပေါ်သက်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူအာမခံအပေါ်အခြေခံအာမခံရန်။ ဒီ 'ပုံမှန်အသုံးပြုမှု' အောက်ကလျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်း။
လေဆာစက်-အပြည့်အဝ 12 လအတွင်းပြန်အခြေစိုက်စခန်းလေဆာစက်အပေါ်အာမခံနှင့် 3rd ပါတီအပေါ် Consumer အစိတ်အပိုင်းများ မှလွဲ. သူမြားကို add warrty သက်ဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူရန်။6လ, မှန်ဘီလူး & ကြေးမုံ:3လလေဆာရောင်ခြည်ပြွန် RECI အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အာမခံ။
နောက်ကျောအခြေစိုက်စခန်းအာမခံဖို့ CNC Plasma စက်-အပြည့်အဝ 12 လအတွင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာ Consumer အစိတ်အပိုင်းများ မှလွဲ. သူမြားကို add 3rd ပါတီအပေါ် warraty ထုတ်လုပ်တယ်။ ကဲ့သို့သော: စသည်တို့ကို nozzle, လျှပ်ကူးပစ္စည်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးထုပ်
အဆိုပါသင်္ဘောကုန်ကျစရိတ်ကိုသင်ကုန်ပစ္စည်းများ get ဖို့ရှေးခယျြသှားရာလမျးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Express ကိုပု mini ကိုလေဆာသို့မဟုတ် Router ကသာသင့်လျော်သော, ပုံမှန်အားဖြင့်အများဆုံးအမြန်ဆုံးဒါပေမယ့်လည်းစျေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ seafreight အားဖြင့် CNC Router ကစက်သို့မဟုတ်လေဆာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း, ပလာစမာစက်ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျကုန်တင်နှုန်းထားများသာစက်မော်ဒယ်အတည်ပြုပြီးနောက်ကိုးကားနိုင်ပါတယ်, ဤ frieignt ကိုးကားတစ်လလည်းသာတရားဝင်သည်။
Adress: 6-50-501 အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးစင်တာ, Tianqiao, Jinan ရှန်ဒေါင်း
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-531-89003210
E-mail ကို: sales@omni-cnc.com
Skype ကို: Omni-CNC
© Copyright - 2009 - 2018: အားလုံးအခွင့်အရေး။
Skype ကိုအပေါ် chat